Xeer Ilaaliyaha Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir, ayaa soo jeediyay in la magacaabo Guddiga Madaxa Banaan ee Musuq maasuqa – STAR FM SOMALIA
Xeer Ilaaliyaha Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir, ayaa soo jeediyay in la magacaabo Guddiga Madaxa Banaan ee Musuq maasuqa, si looga hortago korarka Musuqa dalka Somaliya, xilli Somaliya ay ka mid tahay dalalka Aduunka ugu musuqa badan.
Axmed Cali Daahir waxa uu sheegay inuu talo ahaan u soo jeedinaayo in la sameeyo Guddigan, si ay u qabtaan shaqada ku saabsan ka hor tagista Musuqa.
Somaliya ilaa hada ma jirto qof musuq maasuq maxkamad loo soo taagay oo masuul Dowladeed ah, islamarkaana la xukumay, laakiin dhowr mar masuuliyiinta Dowladda waxa ay sheegeen inuu jiro Musuq maasuq Hay’adaha Dowladda Dhexdeeda ah.
Xeer Ilaaliyaha waxa uu tilmaamay Guddigaan ka hortagga Musuq maasuqa inay cadaalada hor keeni doonaan qof waliba oo lagu helo musuq si sharciga loo waafajiyo.
“In Hay’adaha ka shaqeysanaya ama baaraya kiisaska la xiriira musuq maasuqa waxaa muhiim ah inay noqdaan kuwa ka madax banaan hay’adaha dowladda, sharciga inay raacaan oo hakuu tilmaamo waddo aad mareyso, waxyaabaha kale ee u baahan in la sameeyo waxaa ka mid ah in la dhiso Guddiga Madaxa banaan ee la dagaallanka Musuq maasuqa, waxaa kaloo muhiim ah iyana in la dhiso guddiga Madaxa banaan ee garsoorka.” Ayuu yiri Xeer ilaaliyaha Qaranka.
Hanti Dhowrka Qaranka Somaliya ayaa horay u sheegay in 19 Wasaaradood oo Xukuumadii tan ka horeysay ee Ra’iisul Wasaare C/wali lagu helay, balse ma jirto ilaa hada masuuliyiin maxkamad loo soo taagay arintaasi.
Madaxda Somalida ayaa ku caan baxay Musuqa iyo ku takri falka awoodaha Qaranka, waxaana taasi ay caado ka tahay dalka Somaliya oo isla xisaabtanka uu yahay mid aanan meesha ku jirin.